Soomaaliya:- Laba Maamul Goboleed Oo Maxaabiis Isku Sii Daynaya Iyo Heshiisyo Ay Wada Galeen
Wednesday May 15, 2019 - 17:38:26 in News by G. Good
Garoowe(HWN):-Maamul goboleedadka Puntland iyo Hirshabeelle ee dalka soomaaliya ayaa ka wada hadlaya sidii ay iskugu sii dayn lahaayeen maxaabiis ku xidhan Garoowe.
Madaxweyneyaasha labada Maamul oo wada hadal ku yeeshay magaalada Garoowe ayaa ka wada hadlaysidii loo sii dayn lahaa maxaabiis ka soo jeeda maamulka Hirshabeelle oo ku xidhan maamulka Puntland.
Daa,uud Xaaji Ciro oo ah afhayeenka maamul goboleedka Hirshabeelle ayaa sheegay in wada hadal dhexmaray madaxweyneyaasha Waare Iyo Deni lagaga wada hadlay sidii xoriyadooda loogu soo celin lahaa maxaabiis ka soo jeeda Hirshabeelle oo ku xidhan Puntland.
Afhayeen Ciro ayaa sidoo kale sheegay in madaxweynaha maamulka Puntland uu ogolaaday in la sii daayo maxaabiis ka soo jeeda deegaanada Hirshabeelle oo ku xidhan maamulka Puntland.
Afhayeenka oo ka hadlaya waxyaabaha lagaga hadlay kulanka labada madaxweyne ayaa waxa uu yidhi "’Kulanka labada madaxweyne oo sidoo kale ay goob joog ka ahaayeen Wasiirradda Amniga labada dhinac, waxaa leysku afgartay in la sii daayo maxaabiista Puntland uga xir xiray Hirshabeelle iyo sidii leysaga kaashan lahaa xoojinta Ganacsiga iyo adkeynta Amniga labada dhinac’’ ayuu yidhi afhayeenka.